Firefox yeIOS ikozvino inokurumidza uye inoshandisa bhatiri shoma | IPhone nhau
Firefox yeIOS ikozvino inokurumidza uye inoshandisa bhatiri shoma
Iyo Hondo yemabhurawuza pane ese mashandiro masisitimu anotendera vashandisi kuti vakwanise sarudza kuti ndeipi inonyanya kukodzera zvaunoda. Safari yeIOS inotipa huwandu hwesarudzo, asi kune vazhinji vashandisi vanoda kuchengeta mabhukumaki avo akatarisana neWindows PC yavo asi vasingashandise Safari, nekuda kwekuti haina kunyatsogadziriswa.
Kunyanya ini ndagara ndichiedza kuyedza kana ndichishandisa Windows asi kuita kwayo kunonoka uye kusingagadziriswe kunondimanikidza kushandisa Chrome kana Firefox. Ose mabhurawuza anondibvumidza kuenzanisira mabhukumaki eWindows PC yangu neangu iPhone pasina matambudziko, ndisina kuisa kwechitatu-bato kunyorera, senge Safari uye iko kunyorera kutsigira iCloud.
Kana iwe uri mushandisi weFirefox paPC yako, zvingangoita kuti iwe zvakare unoshandisa Firefox pane yako iPhone, kuti uwane mabhukumaki ako, nhoroondo yakawiriraniswa nguva dzose ... Iyo yekuvandudza yeFirefox, Mozilla, ichangobva kuburitsa nyowani nyowani kuvandudza mashandiro ebrowser ichiitisa kuti ikurumidze uye nebheteri yakaderera yekushandisa kune vhezheni yapfuura. Sekureva kweMozilla, iyi vhezheni nyowani inoderedza kushandiswa kweCPU ne40% nepo kushandiswa kwendangariro kuchideredzwa ne30%, kunyangwe zvisiri pamidziyo yese.
Pamusoro pekuvandudzwa kwakakosha mukuita kwechishandiso, inongedzo yemushandisi yakagamuchira sarudzo itsva dzinotibvumidza kuti tikwanise kuwana nekukurumidza kufamba uye nemawebhusaiti atinoshanyira kazhinji. Uye zvakare, iro sarudzo yemasimba yakaverengerwa zvakare tsvaga zvinyorwa pamapeji ewebhu atinoshanyira.
Iwo manejimendi etabhu akave zvakare akagadziridzwa achivaratidza iwo mudiki saizi kuwedzera mukuwedzera iyo sarudzo Vhara zvese tabo uye Regedzera sarudzo kuti uvadzosere mushure mekudzima. Iwo manejimendi pakati pemathebhu akagadziridzwa zvichienzaniswa neshanduro yapfuura, saka izvozvi hazvichanetsi kushandura pakati pematebhu akasiyana atakavhura mubrowser.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Firefox yeIOS ikozvino inokurumidza uye inoshandisa bhatiri shoma
Uye zvakadii nezvekushandisa kwedata? kuzvideredza?
Tweaks inoenderana neIOS 9.2-9.3.3 (II)
Springtomize 3 ikozvino inowirirana neIOS 9.2-9.3.3